Protein Supplement တှေ ကို ဘယျလောကျ အထိသောကျနကွေလဲ???? | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On May 21, 2018 Last updated Jan 18, 2020
Protein Supplement တွေ ကို ဘယ်လောက် အထိသောက်နေကြလဲ????
၂၁ ရာစု မှာ ကျန်းမာရေး ကို လူတော်တော်များများ အထူးသတိပြု လာကြတာ ကို Gym တွေ မှာ လူတွေ များနေတာ ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။ Gym မှာ လေ့ကျင်းခန်း လုပ်တာ ကောင်းပါ တယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါတွေ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ မှာ ဆိုးကျိုးတွေ လည်းတော်တော် များပါတယ်။
အကြောင်းအရင်း ကတော့ Gym မှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ ဝိတ်ကျချင်တာရယ် နောက်တစ်မျိုး ကတော့ ကြွက်သားတက်ချင်တာရယ် ဆိုပြီး အဓိကရည်ရွယ်ကြီး နှစ်မျိုးပါ။
ကြွက်သားတက် ချင်လို့ ဆိုပြီး လွဲမှားနေတဲ့ အစားအသောက်ပုံစံ တွေ supplement တွေ ကို လိုတာထက်အဆမတန် သောက်နေတာတွေ ကို ဒီရက်ပိုင်း မှာ တော်တော် များများ တွေ့ လာရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက် ဆောင်းပါး မှာ ကြွက်သား တက်အောင် ကျန်းမာရေး နှင့် အညီ ဘယ်လို စားသောက် ရမလဲ ဆိုတာ ကို အလေး ပေးဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
အရင်ဆုံး supplement မလိုဘဲ အစားအသောက် ကနေ protein အသားဓါတ် ကို ပြည့်ဝအောင် ကျန်းမာရေး နှင့် အညီ အလွန်အကျွံ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို စားကြမလဲ ကို သိဖို့လိုပါမယ်။
တနေ့ကို အသားဓါတ်အနေ နဲ့ ဘယ်လောက်စားရင် လုံလောက်မလဲ????
မိမိကိုယ် အလေးချိန် (Kilogram) ကို 1.5 (သို့)2gram နဲ့မြှောက်ပြီးစားပေးလို့ရပါတယ်။
ဥပမာ – အလေးချိန် 60 kg ရှိတဲ့ သူ အနေနဲ့ဆို အသားဓါတ် (1.5 gram နဲ့မြှောက်ရင်) 90 gram စားပေးလို့ရသလို (2 gram နဲ့မြှောက်ရင်) 120 gram အထိ စားပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီထက်ပို ပြီး မစားသင့်ပါဘူး။ ဒါက အလေးတွေ မပြီး ကြွက်သားတက်အောင် ကစားနေတဲ့ သူတွေ အတွက် စားရမယ့် ပမာဏပါ။ ပုံမှန် လူတွေ အနေနဲ့ ကတော့ အာဟာရ ပြည့်အောင် ဆိုရင် ကိုယ် အလေးချိန် (kilogram) ကို 0.8 gram (သို့) 1 gram နဲ့ မြှောက်ပါ။ ဥပမာ – အလေးချိန် 60 kg ရှိတဲ့ သူဆိုရင် အသားဓါတ် 48 gram ကနေ 60 gram အထိစားလို့ရပါတယ်။
ဘယ်အသားတွေ မှာ အသားဓါတ် ဘယ်လောက် gram တွေပါနေလဲ????
အခု ဖော်ပြထားတဲ့ အသားဓါတ် ပမာဏ တွေ က အသား ၁၀၀ ဂရမ် (6ကျပ်သား) မှာ ပါတဲ့ ပမာဏတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်သား – 20 gram
ဝက်သား – 24 gram
အမဲသား – 24 gram
ဆိတ်သား – 33 gram
ဘဲသား – 19 gram
ကြက်ဥ တစ်လုံး –6gram
ဆော်လမွန်ငါး – 21 gram
ငါးသေတ္တာ – 21 gram
တူနာငါး – 24 gram
ငါးကြင်း – 16 gram
ငါးခူ – 15 gram
တီလားဗီယား – 20 gram
ကကတစ်ငါး – 20 gram
နွားနို့ (240 ml) – 8 gram
အခုနောက်ပိုင်း မှာ အစားအသောက် တွေ အပြင် ကြွက်သား မြန်မြန် တက်အောင် ဆိုပြီး ဖြည့်စွက် ပရိုတင်း မှုန့်တွေပါ သောက်လာကြပါတယ်။ ပရိုတင်းပါဝင် မှု့ ကတော့ brand တစ်မျိုး နဲ့ တစ်မျိုး မတူကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိမိသောက်နေတဲ့ ပရိုတင်းမှုန့် ဘူးမှာ ပါတဲ့ nutrition label (အာပာာရ အညွှန်း) ကို သေချာဖတ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ- protein supplement powder 1 scoop မှာ protein 20 gram ပါတယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ နှစ်ခွက် လောက် သောက်ဖြစ်ရင် နောက်ထပ် အသားအစာ ကနေ ရမယ့် protein အသားဓါတ် ပမာဏ ကို လျှော့စားပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ – protein 120 gram စားလို့ရတဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆိုရင် protein supplement powder2scoop သောက်ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် အစားအစာ ကနေ protein ပမာဏ ကို 80 gram ပဲ စားလို့ရပါမယ်။
အသားဓါတ်တွေ ကို လိုတာထက် ပို ပြီးစားမိရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ????
အသားဓါတ် များများ စားလေလေ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ Urea (ယူရီးယား) ဓါတ်တွေ များလာတဲ့ အတွက် ကျောက်ကပ် က ပို အလုပ်လုပ် ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် muscle build ကစားနေသူများ အတွက် ရေကို သာမန် ထက်ပိုပြီးသောက်ဖို့လိုလာပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မသောက်ပဲ နေတာကြာရင် ကျောက်ကပ် ကလည်း အညစ်အကြေး များကို ကောင်းကောင်း မစွန့်ထုတ် နိုင်တော့ပဲ နောက်ဆုံး မှာ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်း အရမ်းမြင့်တက်သွားပါတယ်။ ဆေးပညာ စကား အရ ဆို renal failure ဝင်ပြီး အခြေအနေ အရမ်းဆိုးပါက အသက်ပါဆုံးရှုံး နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကြွက်သားတက်အောင် (Muscle Build/ Weight Gain) ကစားနေသူတွေ အတွက် ရေကို သတိတရ နဲ့ သောက်ပေးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၂၁ ရာစု မှာ ကနျြးမာရေး ကို လူတျောတျောမြားမြား အထူးသတိပွု လာကွတာ ကို Gym တှေ မှာ လူတှေ မြားနတော ကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ သိနိုငျပါတယျ။ Gym မှာ လကေ့ငျြးခနျး လုပျတာ ကောငျးပါ တယျ ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒါတှေ ရဲ့ နောကျဆကျတှဲ မှာ ဆိုးကြိုးတှေ လညျးတျောတျော မြားပါတယျ။
အကွောငျးအရငျး ကတော့ Gym မှာ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျရတဲ့ ရညျရှယျခကျြ က နှဈမြိုး ရှိပါတယျ။ တဈမြိုးကတော့ ဝိတျကခြငျြတာရယျ နောကျတဈမြိုး ကတော့ ကွှကျသားတကျခငျြတာရယျ ဆိုပွီး အဓိကရညျရှယျကွီး နှဈမြိုးပါ။
ကွှကျသားတကျ ခငျြလို့ ဆိုပွီး လှဲမှားနတေဲ့ အစားအသောကျပုံစံ တှေ supplement တှေ ကို လိုတာထကျအဆမတနျ သောကျနတောတှေ ကို ဒီရကျပိုငျး မှာ တျောတျော မြားမြား တှေ့ လာရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတဈခေါကျ ဆောငျးပါး မှာ ကွှကျသား တကျအောငျ ကနျြးမာရေး နှငျ့ အညီ ဘယျလို စားသောကျ ရမလဲ ဆိုတာ ကို အလေး ပေးဖျောပွပေးသှားပါမယျ။
အရငျဆုံး supplement မလိုဘဲ အစားအသောကျ ကနေ protein အသားဓါတျ ကို ပွညျ့ဝအောငျ ကနျြးမာရေး နှငျ့ အညီ အလှနျအကြှံ မဖွဈအောငျ ဘယျလို စားကွမလဲ ကို သိဖို့လိုပါမယျ။
တနကေို့ အသားဓါတျအနေ နဲ့ ဘယျလောကျစားရငျ လုံလောကျမလဲ????
မိမိကိုယျ အလေးခြိနျ (Kilogram) ကို 1.5 (သို့)2gram နဲ့မွှောကျပွီးစားပေးလို့ရပါတယျ။
ဥပမာ – အလေးခြိနျ 60 kg ရှိတဲ့ သူ အနနေဲ့ဆို အသားဓါတျ (1.5 gram နဲ့မွှောကျရငျ) 90 gram စားပေးလို့ရသလို (2 gram နဲ့မွှောကျရငျ) 120 gram အထိ စားပေးလို့ရပါတယျ။ ဒီထကျပို ပွီး မစားသငျ့ပါဘူး။ ဒါက အလေးတှေ မပွီး ကွှကျသားတကျအောငျ ကစားနတေဲ့ သူတှေ အတှကျ စားရမယျ့ ပမာဏပါ။ ပုံမှနျ လူတှေ အနနေဲ့ ကတော့ အာဟာရ ပွညျ့အောငျ ဆိုရငျ ကိုယျ အလေးခြိနျ (kilogram) ကို 0.8 gram (သို့) 1 gram နဲ့ မွှောကျပါ။ ဥပမာ – အလေးခြိနျ 60 kg ရှိတဲ့ သူဆိုရငျ အသားဓါတျ 48 gram ကနေ 60 gram အထိစားလို့ရပါတယျ။
ဘယျအသားတှေ မှာ အသားဓါတျ ဘယျလောကျ gram တှပေါနလေဲ????
အခု ဖျောပွထားတဲ့ အသားဓါတျ ပမာဏ တှေ က အသား ၁၀၀ ဂရမျ (6ကပျြသား) မှာ ပါတဲ့ ပမာဏတှေ ဖွဈပါတယျ။
ကွကျသား – 20 gram
ဝကျသား – 24 gram
ဆိတျသား – 33 gram
ကွကျဥ တဈလုံး –6gram
ဆျောလမှနျငါး – 21 gram
ငါးသတ်ေတာ – 21 gram
ငါးကွငျး – 16 gram
ကကတဈငါး – 20 gram
နှားနို့ (240 ml) – 8 gram
အခုနောကျပိုငျး မှာ အစားအသောကျ တှေ အပွငျ ကွှကျသား မွနျမွနျ တကျအောငျ ဆိုပွီး ဖွညျ့စှကျ ပရိုတငျး မှုနျ့တှပေါ သောကျလာကွပါတယျ။ ပရိုတငျးပါဝငျ မှု့ ကတော့ brand တဈမြိုး နဲ့ တဈမြိုး မတူကွပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ မိမိသောကျနတေဲ့ ပရိုတငျးမှုနျ့ ဘူးမှာ ပါတဲ့ nutrition label (အာပာာရ အညှနျး) ကို သခြောဖတျကွညျ့ဖို့လိုပါတယျ။ ဥပမာ- protein supplement powder 1 scoop မှာ protein 20 gram ပါတယျဆိုရငျ တဈနေ့ နှဈခှကျ လောကျ သောကျဖွဈရငျ နောကျထပျ အသားအစာ ကနေ ရမယျ့ protein အသားဓါတျ ပမာဏ ကို လြှော့စားပေးဖို့လိုပါတယျ။ ဥပမာ – protein 120 gram စားလို့ရတဲ့ သူတဈယောကျအနနေဲ့ ဆိုရငျ protein supplement powder2scoop သောကျဖွဈနတေယျ ဆိုရငျ အစားအစာ ကနေ protein ပမာဏ ကို 80 gram ပဲ စားလို့ရပါမယျ။
အသားဓါတျတှေ ကို လိုတာထကျ ပို ပွီးစားမိရငျ ဘာတှေ ဖွဈလာမလဲ????
အသားဓါတျ မြားမြား စားလလေေ စှနျ့ပဈ ပစ်စညျးဖွဈတဲ့ Urea (ယူရီးယား) ဓါတျတှေ မြားလာတဲ့ အတှကျ ကြောကျကပျ က ပို အလုပျလုပျ ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ muscle build ကစားနသေူမြား အတှကျ ရကေို သာမနျ ထကျပိုပွီးသောကျဖို့လိုလာပါတယျ။ အဲ့ဒီလို မသောကျပဲ နတောကွာရငျ ကြောကျကပျ ကလညျး အညဈအကွေး မြားကို ကောငျးကောငျး မစှနျ့ထုတျ နိုငျတော့ပဲ နောကျဆုံး မှာ ကြောကျကပျရောဂါ ဖွဈတဲ့ ရာခိုငျနှုနျး အရမျးမွငျ့တကျသှားပါတယျ။ ဆေးပညာ စကား အရ ဆို renal failure ဝငျပွီး အခွအေနေ အရမျးဆိုးပါက အသကျပါဆုံးရှုံး နိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကွှကျသားတကျအောငျ (Muscle Build/ Weight Gain) ကစားနသေူတှေ အတှကျ ရကေို သတိတရ နဲ့ သောကျပေးဖို့ အကွံပွုခငျြပါတယျ။